२०७४ माघ १८ गते बिहीवारको प्रतीक दैनिक
सेवाकेन्द्र सार्ने निर्णयको विरोधमा सुवर्णपुरमा आन्दोलन जारी, बन्दकर्ताद्वारा ट्याङ्कर तोडफोड
प्रस, ठोरी, १७ माघ/ वन्दको अवज्ञा गरेको भन्दै ठोरी गापा–५ सुवर्णपुर चोकमा बन्दकर्ताले वुधवार बिहान एउटा ट्याङ्कर तोडफोड गरेका छन् । ठोरी गापा–४ विजयबस्तीमा रहेको पेट्रोल पम्पमा तेल झारेर फर्कने क्रममा ना. २ ख ७०३७ नम्बरको ट्याङ्कर बन्दकर्ताले तोडफोड गरिदिएको सशस्त्र प्रहरी बोर्डर आउट पोस्ट सुवर्णपुरका प्रहरी निरीक्षक अमर गुरुङले जानकारी दिए । बन्दकर्ताले प्रहार गरेको ढुङ्गा लागेर ट्याङ्करको विन्डस्क्रीन र हेडलाइट फुटेको प्रनि गुरुङले बताए । ठोरी गापाको सेवा केन्द्र सार्ने निर्णयको विरोध गर्दै आन्दोलनमा उत्रेका सुवर्णपुरवासीले वीरगंज–ठोरी सडकखण्डमा मङ्गलवारदेखि गाडी गुडन दिएका छैनन् । बन्दकर्ताले वीरगंज–ठोरी सडकखण्डमा सवारी साधन गुडन नदिएकोले जिल्ला सदरमुकाम वीरगंज आवतजावत गर्न ठोरी र निर्मलबस्तीका सर्वसाधरणलाई सास्ती भोग्नुपरेको छ । गाउँ भेलाले ठोरी गापा–५ मा रहेको सेवा केन्द्र ठोरी घ्याङडाँडामा सार्ने निर्णय गरेपछि सुवर्णपुरवासी सङ्घर्ष समिति गठन गरेर आन्दोलनमा उत्रेका छन् । बन्दकर्ताले गाउँपालिका कार्यालयको मूल गेटमा बिहानदेखि अनिश्चतकालीन तालाबन्दी गरी चक्काजाम
लागूऔषध ओसारपसारमा २ महिलासहित ५ जना पक्राउ
प्रस, वीरगंज, १७ माघ/ जिल्ला प्रहरी कार्यालय, पर्साले लागूऔषध ओसारपसार गरेको आरोपमा ५ जनालाई पक्राउ गरी आज सार्वजनिक गरेको छ । जिप्रका, पर्साले आज पत्रकार सम्मेलन गरी माघ १६ गते १० किलो चरेससहित एक भारतीय पुरुष र दुईजना नेपाली महिलालाई इनर्वाबाट पक्राउ गरेको जनाएको छ । नेपालबाट भारत चरेस लैजाँदै गरेको अवस्थामा वीरगंज–१६ बस्ने २० वर्षीया अफसाना खातुन, २५ वर्षीया रेहाना खातुन र भारत, पश्चिमी चम्पारण नयाँटोला बस्ने ६० वर्षीय जहुर आलमलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । पक्राउ परेका महिलाले कम्मरमा चरेस लुकाएर भारततर्फ लैजाँदै गरेको अवस्थामा प्रहरीले पक्राउ गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बताइएको छ । पक्राउ परेका जहुर लागू औषध खरिद बिक्री गर्ने कारोबारी रहेको र दुवै महिलालाई चरेस भारतसम्म पु¥याउन रकम दिएको प्रहरीले जनाएको छ । पक्राउ परेकी महिलासँग ८ महिनाको बालक पनि छ । यसैगरी साउन ४ गते वीरगंज, आदर्शनगरबाट भारत, पश्चिमी चम्पारण चनपटिया बस्ने २३ वर्षीया प्रमिलादेवी पनि लागू औषध कारोबारीको आर्थिक प्रलोभनमा परी लागू औषध इन्जेक्सन नेपाल ल्याइरहेको अवस्थामा पक्राउ परेको प्रहरीले जनाएको
बिजुली गतिमा बारामा काठ चोरी, जिल्ला वन र मातहतका निकाय बेखबर
प्रस, निजगढ, १७ माघ/ जिल्ला वन बारा मातहतको निजगढ सेक्टर वन र भलुवाहीखोर इलाका वनको वन क्षेत्रमा काठ तस्कर समूहहरू बिजुली गतिमा चोरी–तस्करीको धन्दा चलाइरहेका छन् । भलुवाहीखोर इलाका वनको क्षेत्रमा पर्ने राजमार्गदेखि बढीमा १ किलोमिटर आसपास सिम्री जाने सडक नजिकै चारवटा सालको हरियो रूख ढालेर तस्करहरू गोलाई लैजान सफल भएका छन् । चार दिन अघि वन कर्मचारीलाई घटनाबारे थाहा थियो तर आप्mनो कमजोरी लुकाउन घटनालाई गुपचुप राखेका थिए । माघ १३ गतेको घटना माथिल्लो निकायलाई जानकारी नदिनु आप्mनो कमजोरी लुकाउन खोजिएको बुझिन्न्छ । तस्कर समूहले सानो चार पाङ्ग्रे गाडी प्रयोग गर्दै काठ राजमार्ग हुदै सुरक्षित गन्तव्य लगेका छन् । दुई–अढाई वर्ष अघि तस्करले वनमा गाडी हुलेर काठ चोरी तस्करी गर्न सक्ने राजमार्ग आसपासका ठाउँमा करिब १० किलोमिटर लामो खाल्टोसमेत खनेको थियो । तर तस्कर समूहले वन–जङ्गल भित्र बसेका बस्तीमा जाने बाटो हुँदै ठाडो रूख ढाल्ने र चोरी तस्करी गर्ने कार्य पुनः शुरु गरेको छ । साइकलमा दिनभर गस्ती गर्ने गरेको भलुवाहीखोर इलाका वनका प्रमुख एवं सहायक वन अधिकृत गौरीशङ्कर केशरीले बताए । रातम
विकासको लागि यो मोडेल हुन सक्छ ?
सञ्जय साह मित्र कतिपय कुरामा आलोचना सहनुपर्दा पनि त्यति दुःख लाग्दैन । यस आलेखको सम्बन्धमा पनि मेरो सन्दर्भमा यो लागू हुन्छ किनभने कतिपयलाई यो मन नपर्न सक्छ । यद्यपि यो स्वतन्त्र विचार हो, यसकारण आप्mनो वैचारिक स्वतन्त्रताको उपयोग, कसैलाई दुरुपयोग लागे पनि दुस्साहस गर्दैछु । “प्रभु साह जे वाचा करइछई, ऊ पूरा होखलई” नवनिर्वाचित सFंसद एवं पूर्वमन्त्री प्रभु साहले एक सन्दर्भमा भनेका छन् । साहलाई विकास पुरुषको संज्ञा दिनेको कमी छैन, सार्वजनिक सञ्जाल तथा विभिन्न सञ्चारमाध्यममा पनि । उनले विकासको थालनी गरेका छन् । सामान्य परिवारबाट उठेर उनी देशमा राजनीतिको क्षेत्रमा आप्mनो नाम स्थापित गर्न सफल बनेका छन् । उनी लेखक पनि हुन् । उनका राजनैतिक दर्शनका पुस्तक पनि प्रकाशित छन् । अन्य लेखहरूको सङ्ग्रह पनि प्रकाशित छ । चारभन्दा बढी पुस्तकाकार कृति प्रकाशित साह गीतकार पनि हुन् । कैयौं गीति एलबम पनि निस्केको छ । उनको एउटा आर्थिक प्रस्तावले संसद्मा लामो समय बहस ल्याएको थियो । हरेक स्थानीय तहमा अनिवार्यरूपमा ‘क’ वर्गको बैंक पुग्नुपर्छ भन्ने अवधारणालाई उनले स्थापित गराएका हुन् । भाषा, साहित्य र
हाम्रो सामन्ती समाजमा जुत्ता पालिसलाई निकृष्ट काम मानिन्छ, शायद फोहर उठाउनेभन्दा पनि । जुत्ता पालिसमा निम्न कर्म मात्र समाहित मानिंदैन, कसैको दासता पनि स्विकारिएको भाव लुकेको पाइन्छ । अनि किन काङ्ग्रेसजन यस्तो निकृष्ट कर्म गर्न अघि सरे ? यदि यो हिजो सत्तामा बसेको अहमत्याइँले गर्दा पार्टीले पराजय बेहोरेको पश्चात्तापको परिणति हो भने निश्चय नै काङ्ग्रेसजन भद्र राजनीतिका हिमायती हुन् भनी मान्नुपर्छ । होइन, फेसनका लागि, व्यापक पराजयबीच प्रचार पाउने प्रयास हो भने यसले दासत्वकै मानसिकतालाई प्रवद्र्धन गर्नेछ । किनभने पार्टीले पराजय बेहोरेको वा पार्टीमा गुट–उपगुटहरू सिर्जना भएर आज काङ्ग्रेसको यो हविगत भएको, बारम्बार सत्तामा आएर पनि कुनै कालजेय काम गर्न नसकेको ग्लानिबोधबाट जुत्ता पालिस गरेर पश्चात्ताप गरिएको हो भने खोइ त्यस भीडमा यी सब कुराका जिम्मेदार नाइकेहरू ? हो यस कार्यमा सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईको नाममा स्थापित प्रतिष्ठानको संलग्नता रहेकोले नाम अनुसार पार्टीको शुद्धीकरण अभियानले सार्थकता भने पाएको देखियो । पञ्चायतकालमा कृष्णप्रसाद भट्टराई लक्ष्मीको चियापसलमा चिया पिउँदै राजनीत
२०७४ माघ १७ गते बुधवारको प्रतीक दैनिक
पर्साको खोलाहरूमा ठेकेदारको मनोमानी, ओभरलोडले ग्रामीण यातायात अव्यवस्थित
प्रमोद यादव, रङ्गपुर, १६ माघ/ पर्साको राष्ट्रिय वनसँग सीमा जोडिएका खोलाहरूबाट मनोमानी ढङ्गले गिट्टी, बालुवा, ढुङ्गा उत्खनन गरेर क्षमताभन्दा बढी ट्याक्टरमा लोड गरी ओसारपसार हुँदा ग्रामीण सडकहरू खाल्डाखुल्डीमा परिणत भएको छ । जिल्ला समन्वय समिति पर्साले एक वर्षको लागि पर्साको ५ खोला भलुवाही, जमुनिया, कर्जनिया, सिङयाही, भेडाहाबाट ३ करोड ४० लाखमा ठेक्का गरेको लेखा अधिकृत हरि राउतले बताए । ठेकेदारले खोलाहरूबाट जथाभावी गिट्टी, बालुवा, ढुङ्गा उठाउँदा खोला पोखरीजस्तो भएको छ । बढी गहिराइमा ढुङ्गा, बालुवा, गिट्टी र रूखको जरा उत्खनन गर्ने प्रावधान नभए पनि ठेकेदारले दुईपट्टी जङ्गल रहेकोले रूखको जरासम्म उत्खनन गरेको जिल्ला वन कार्यालय, पर्साको संरक्षण तथा सदुपयोग शाखाका प्रमुख बशिष्टनारायण पटेलले बताए । ठेकेदारले खोलामा होर्डिङ्गबोर्ड लगाउनुपर्ने, पूर्जी काटने कर्मचारीलाई पोशाक, परिचयपत्र, ओभरलोड नगर्ने, प्रतिघनफिट नापेर पूर्जी काट्नुपर्ने प्रFवधान भए पनि ठेकेदारहरू मनपरी कार्य गर्दै आएका छन् । टेलरमा जति लोड गरे पनि १ सय ३१ घनफिटको रु ६०० काटने गरेका छन् । कुनै टेलरमा १०
काठ तस्करीमा संलग्नसहित डेढ लाख बराबरको काठ बरामद, बस्तीमा छापामारी गर्न जिल्ला वन बारा उदासीन
प्रस, निजगढ (बारा), १६ माघ/ निजगढ नगरपालिका–१ भरतगंज सिगौलबाट काठ तस्करीमा संलग्न एकजनासहित डेढ लाख बराबरको काठ इलाका प्रहरी निजगढले मङ्गलवार बिहान बरामद गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा भरतगंजसिगौंलका १८ वर्षीय मेसी भनिने अक्षय कुमर रहेको इलाका प्रहरी कार्यालय, निजगढले जनाएको छ । इप्रका निजगढबाट सादा पोशाकमा खटेका प्रहरी अनिल साहले टायरगाडामा काठ तस्कर गरिरहेको अवस्थामा सालको चिरान काठ, गोरुसहित कुमरलाई नियन्त्रणमा लिएका थिए । इप्रका निजगढबाट खटेको प्रहरीले नियन्त्रण लिएलगत्तै सिगौल अस्थायी प्रहरी चौंकीबाट थप सुरक्षाकर्मी मगाएका थिए । टायरगाडामा लोड १५ थान सालको चिरान कडी र चिरानस्थलबाट ५ थान सालको गोलाइ बरामद भएको इलाका वन कार्यालय, सिगौंलका सहायक वन अधिकृत संयोग बस्नेतले जानकारी दिए । चिरान काठ र गोलाइ गरी लगभग ५० क्युफिट काठ रहेको र यसको बजार मूल्य करिब १ लाख ५० हजार हुन्छ । निनपा–१ भरतगंजसिगौंल काठ चोरी तस्करीका लागि अखडा मानिंदै आए पनि काठ तस्करीमा संलग्नसहित प्रहरीले यसरी पक्राउ गरेको यो शायद पहिलो पटक हो । स्थानीय काठ तस्करहरूले जङ्गलबाट सालका गोलाइ चोरी तस्कर
पर्सागढी गोल्डकप ः एपिएफ विजयी
प्रस, वीरगंज, १६ माघ/ पर्साको बढनियारमा जारी प्रथम पर्सागढी गोल्डकप अन्तर्गत आज भएको खेलमा मकवानपुर ११ हेटौंडालाई एकको विरुद्ध तीन गोल गरी रुद्रवाहिनी गण पथलैया (एपिएफ) विजयी भएको छ । आजको खेलमा मकवानपुरका आशिक बरालले खेलको १० औं मिनेटमा पहिलो गोल गरेका थिए । तर त्यसपछि रुद्र बाहिनी गणका तर्फबाट पशुपति विकले ४५ औं मिनेटमा गोल गर्दै खेललाई बराबरीमा पु¥याए । विकले नै मध्याह्नपछि ७७ औंं मिनेटमा अर्काे गोल गरेर गणलाई अग्रता दिलाएका थिए भने खेल समापनको ५ मिनेट अगाडि अन्तिम चरणमा गणकै कुमार दोङ्गले थप एक गोल गरेका थिए । पहिलो गोल गरेको मकवानपुरले खेल अवधिभरि अर्काे गोल गर्न सकेन र गणसँग पराजित भएर प्र्रतियोगिताबाट बाहिरिन पुग्यो । आजको खेलको म्यान अफ द म्याच दुई गोल गरेका रुद्रवाहिनी गण पथलैयका पशुपति विक घोषित भए । माघ १७ गते बुधवार नवजागृति युवा क्लब सिमरा र चौधरी ११ बाराबीच खेल हुने आयोजकले बताएको छ ।
अन्तर्विद्यालय टी–२० क्रिकेट प्रतियोगिता, सिनियर र जुनियर दुवै खेलमा आइडियल एकेडमी विजयी
प्रस, वीरगंज, १६ माघ/ शहीद दिवसको अवसरमा आजदेखि वीरगंजको नारायणी रङ्गशालामा प्रोगे्रशिभ गु्रप अफ स्कूल्सको आयोजनामा अन्तर्विद्यालय टि–ट्वान्टी क्रिकेट प्रतियोगिता शुरु भएको छ । जिल्ला समन्वय समिति पर्साका सभापति नेक महमदले प्रतियोगिताको उद्घाटन गरेका थिए । वीरगंज गोल्डेन गेट एकेडमीका सञ्चालक सगीर अंसारीको अध्यक्षतामा शुरु भएको प्रतियोगिता उद्घाटन समारोहमा सहभागी ८ वटा टिमले मार्चपास गरेका थिए । आज सम्पन्न उद्घाटन खेलमा आइडियल एकेडमी जुनियर सिनियरतर्फको दुवै खेल जितेको शौकत अलिले बताए । पहिलो खेलमा सिनियरतर्फ अFइडियल एकेडमीले युनिभर्सल माविलाई १२० रनको फराकिलो अन्तरले पराजित ग¥यो । पहिलो ब्याटिङ्ग गर्दै आइडियलले १२ ओभरमा ५ विकेटको नोक्सानीमा १५१ रन जोडेको थियो । प्रतिउत्तरमा युनिभर्सल मावि ८.५ ओभरमा सबै विकेट गुमाएर ३१ रनमा सीमित भयो । यो खेलको म्यान अफ द म्याच जिसान अहमद घोषित भए । दोस्रो खेलमा जुनियरतर्फ पनि आइडियल एकेडमीले युनिभर्सल स्कूललाई ४७ रन अन्तरले पराजित ग¥यो । पहिलो ब्याटिङ्ग गर्दै आइडियलले निर्धारित १२ ओभरको खेलमा ६ विकेट गुमाउँदै ११४ रन बनाएको थियो । प्रतिउ
प्रदेश नं दुईले फेर्ला त काँचुली ?
रामेश्वर सेढाइ तीव्र तनाव र विवादका बीच दोस्रो संविधानसभामार्पmत् जारी भएको नेपालको संविधानले सङ्घीयतालाई संस्थागत गरेसँगै तीन तहका सरकार निर्माणका लागि २०७४ सालमा भएका निर्वाचनबाट स्थानीय सरकार गठन भई प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति र प्रदेशको अस्थायी मुकाम तोकिएसँगै प्रादेशिक सरकार निर्माण गर्न दलहरू आन्तरिक गृहकार्यमा व्यस्त छन् भने राष्ट्रियसभाको निर्वाचन परिणामपछिको करिब एक हप्तामा केन्द्र सरकारको पनि निर्माण प्रक्रिया शुरु हुने अपेक्षा रहेको छ । स्थिरता र समृद्धिको नारा बोकेको र छवटा प्रदेशका साथै केन्द्रमा समेत सरकार बनाउने गरी जनादेश प्राप्त गर्न सफल वाम गठबन्धन र प्रदेश नं दुईमा सरकार बनाउन सक्ने गरी जनादेश प्राप्त मधेसी गठबन्धन निकै तामझाम र उत्साहका साथ आआप्mनो राजनीतिक आधार क्षेत्रमा सक्रिय छन् भने ऐतिहासिक पराजय बेहोरेको नेपाली काङ्ग्रेस हारले रन्थनिएर कुना पसे सरह छ । प्रदेश नं २ मा भएको स्थानीय र प्रदेश एवं प्रतिनिधिसभा निर्वाचनले सिद्धान्ततः जुन जुन मुद्दाको पक्षमा जनमत रहेको देखाएको छ, बाँकी छवटा प्रदेशको निर्वाचनले त्यसभन्दा भिन्न र कतिपय विपरीत प्रकृतिका मुद्दाहरूको
अहिले देशमा विकासको नाममा कि विद्युत् आयोजना कि सडक निर्माणकै चर्चा छ । हुन पनि सडकले गर्दा नागरिकलाई विभिन्न रोजगार, बजार र उत्पादन खरिद–बिक्रीमा निकै सहुलियत हुन्छ । आजको विश्वमा विकास भन्नु नै पूँजीको निरन्तर र चातुर्दिक प्रवाह नै हो । जसरी मानिसलाई बाटो नभए गतिशीलता प्राप्त हुँदैन, त्यसैगरी पूँजीलाई पनि बाटो नै चाहिन्छ । र पूँजी नियमित चलायमान भइरह्यो भने विकास स्वतः हुन थाल्छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्ग बन्नु अघि जुन ठाउँको विकासको कल्पना नै गर्न सकिएको थिएन, ती स्थान आजका दिनमा राम्रो बजारको रूपमा विकसित भइसकेका छन् । त्यहीं सबै कुराको उपलब्धता र साधन स्रोत भएर पनि बाटोको अभावमा समग्र तराईको विकास हुन सकेन । यसै तथ्यलाई नागरिकले हिजो बुझेको थियो आज राज्य पनि बुझेर वा बाध्य भएर बाटो निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको छ । यसका लागि बाटो भएको ठाउँमा पनि तीव्रता र छोटो दूरीमा गन्तव्यमा पुग्न चौडा चाक्ला, अवरोधरहित थप बाटाहरू निर्माणको होड नै चलेजस्तो छ । निजगढ–काठमाडौं एक्सप्रेस हाइवे, समग्र तराईलाई समेटने गरी हुलाकी राजमार्ग र पूर्वमा तराई–पहाड जोडने तमोर करिडोरमा बाटो निर्म
२०७४ माघ १६ गते मङ्गलवारको प्रतीक दैनिक
वीरगंजको सुनचाँदी पसलमा राजस्वको छापा
प्रस, वीरगंज, १५ माघ/ मध्यमाञ्चल क्ष्Fेत्रीय राजस्व अनुसन्धान कार्यालय, पथलैयाले वीरगंजको दुईवटा सुनचाँदी पसलमा छापा मारेको छ। गहवामाई मन्दिर नजिक न्यु ओम ज्वेलर्स र लिङ्करोडस्थित बालाजी ज्वेलर्समा राजस्वको टोलीले छापा मार्दै सम्पूर्ण कागजातहरू नियन्त्रणमा लिएको छ। २४–२५ जना राजस्व कर्मचारीको टोलीले मध्याह्न १२ बजेपछि वीरगंजमा छापा हानेका थिए। अनुसन्धान अधिकृत तेजमणि काप्mले र भीम देवकोटाको दुईवटा समूह बनाएर दुई ठाउँमा छापामारी गर्दा माईस्थानका व्यापारीहरूले हुलहुज्जत मचाई छापा हान्न दिएका थिएनन्। केही घण्टापछि राजस्व टोलीले पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनोदप्रकाश सिंहसँग अनुमति र परामर्श गरेपछि नेपाल र सशस्त्र प्रहरीको सहयोगमा दुवै सुनचाँदी पसलमा छापा हानी कागजात नियन्त्रणमा लिएर पथलैया लगेको राजस्व अनुसन्धान कार्यालय, पथलैयाका प्रमुख दिव्यराज पोखरेलले बताए। राजस्वको आकस्मिक अपरेशनको कारण वीरगंजको सुनचाँदी कारोबार दिनभरि प्रभावित भएको छ। वीरगंजमा राजस्वले सुनचाँदी पसललाई निशाना बनाउँदै छापामारी गरेको हल्ला पैmलिएपछि सयभन्दा बढी पसलहरू भटाभट बन्द भएका थिए। पर्सा
ठोरीको सेवा केन्द्र घ्याङडाँडा सार्ने निर्णय
प्रस, ठोरी, १५ माघ/ ठोरी गाउँपालिकाको सेवा केन्द्र साबिक निर्मलवस्ती गाविसको घ्याङडाँडामा सारिने भएको छ। गाउँपालिकाको परिषद्पछि बसेको बोर्ड बैठकले ठोरी गाउँपालिका–५ सुवर्णपुरमा रहेको सेवा केन्द्र घ्याङडाँडा सार्ने निर्णय गरेको हो। साबिक ठोरी, निर्मलबस्ती र सुवर्णपुर गाविसलाई पायक पर्ने भएकोले सुवर्णपुरमा रहेको हालको सेवा केन्द्र ठोरी गाउँपालिका–४ को घ्याङडाँडा सार्ने निर्णय भएको गाउँपालिकाका प्रवक्ता रामप्रकाश कुँवरले जानकारी दिए । गाउँपालिकाको बहुमत बोर्ड सदस्यले निर्वाचित भएको ६ महिनाभित्र सेवा केन्द्र सार्न सक्ने अधिकार प्रयोग गर्दे सेवा केन्द्र सारिएको प्रवक्ता कुँवरले जानकारी दिए। हाल रहेको सेवा केन्द्र अपायक देखिएकोले सार्ने पक्षमा बहुमत सदस्यले समर्थन जनाएको उनले बताए। सेवा केन्द्र सार्ने निर्णयमा आपत्ति जनाउँदै गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष शान्ति थिङ र वडा ५ का अध्यक्ष रामबहादुर पाख्रीन भने बैठक छाडेर हिंडेका थिए। उपाध्यक्ष थिङ र वडाध्यक्ष पाख्रीनले सेवा केन्द्र सुवर्णपुरबाट सार्न नहुने भन्दै विरोध जनाएका थिए। गाउँपालिकाको बोर्डमा १३ जना सदस्य रहने व्यवस्था अनुसार उप
नदी, जङ्गली जनावर नियन्त्रण र सडक निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्दै ठोरी गापाको पहिलो परिषद् सम्पन्न
प्रस, ठोरी, १५ माघ/ ठोरी गाउँपालिकाको सोमवार सम्पन्न पहिलो ऐतिहासिक गाउँपालिका परिषद्ले चालू आर्थिक वर्ष २०७४–०७५ का लागि रु २४ करोड ८७ लाख ५५ हजार ६ सय २५ रुपियाँको अनुमानित आयव्ययसहित वार्षिक बजेट, नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। ठोरी गाउँपालिका–२ को ठोरी हेल्थपोस्ट परिसरमा आयोजित परिषद् बैठकमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष पदमलाल श्रेष्ठले आर्थिक वर्ष २०७४–०७५ को अनुमानित आयव्यय विवरणसहितको वार्षिक बजेट, नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन्। आर्थिक वर्ष २०७४–०७५ को निम्ति सञ्चित कोषबाट खर्च गर्न सकिने अधिकार अनुसार गाउँपालिका, वडापालिका, पूँजीगत खर्च गर्ने विषयगत सेवा र कार्यका लागि चालू खर्च, पूँजीगत खर्च र वित्तीय व्यवस्था रकमसमेत गरी रु २४ करोड ८७ लाख ५५ हजार ६ सय २५ बराबरको बजेट अध्यक्ष श्रेष्ठले विनियोजन गरेका हुन्। जसमध्ये चालू खर्चतर्पm रु ५ करोड ५८ लाख ८३ हजार, पूँजीगत खर्चतर्पm रु १४ करोड ३५ लाख ४६ हजार ६ सय २५ र विषयगत सेवातर्पm रु ४ करोड ९३ लाख २६ हजार रहेको छ। अध्यक्ष श्रेष्ठले सार्वजनिक गरेको बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा दिगो विकासका लागि नदी नियणन्त्रण, जङ
सुसाइड नोट छोडेर बिदा भए प्रदीप
प्रस, परवानीपुर, १५ माघ/ बारा, परसौनी–६ बेलहियाका प्रदीपकुमार गुप्ताले आइतवार मध्याह्न १२ बजे आप्mनै कोठामा ज्यान दिए। वीरगंज–१२ मुर्लीमा डेरा लिई उनी अध्ययन गर्दैथिए। उनले बहाल लिएकै कोठामा झुन्डिएर ज्यान दिएका हुन्। प्रेमिकाको वियोगमा उनले ज्यान दिएको खुलेको छ। वीरगंज, नेशनल टे«डिङस्थित अनुभूति कलेजमा बिबिएस प्रथम वर्षमा अध्ययनरत प्रदीपले आप्mनी प्रेमिकालाई ‘खुशी भएर बाँच’ भन्दै आत्महत्या गरेका हुन् । प्रदिपले फिल्मी शैली अपनाएको प्रहरीको भनाइ छ। उनले भोजपुरी भाषामा–‘अब हम जातानि, बाईबाई–आइ लभ यू’ लेखेका छन्। प्रदीपकी प्रेमिकाको बिहे यसै साता तय भएपछि उनी तनावमा थिए। उनको मोबाइलबाट प्रेमिकासँग भएको संवादलाई आधार बनाएर प्रहरीले अनुसन्धान गर्दा प्रेमिकाको पहिले प्रदीपसँग प्रेमप्रसङ्ग चलको थियो। पछि अर्कै केटासँग बिहे तय भएपछि प्रदीपले केटीलाई भागीबिहे गर्ने प्रस्ताव राखेका थिए। तर केटीले अस्वीकार गरिन्। केटीले मेरो बिहे हुन लागेको छ, तिमी पनि बिहे गरी खुशी भएर बाँच, हामी साथी बन्न सक्छौं म्यासेन्जरमा सन्देश पठाएकी थिइन्।
प्रसिद्ध गोरुबजार लोपोन्मुख, अतिक्रमणको चपेटामा
प्रस, सिम्रौनगढ, १५ माघ/ सिम्रौनगढ नगरपालिका–६ को प्रसिद्ध गोरुबजार लोप हुने अवस्थामा पुगेको छ । यो गोरुबजार नेपालकै प्रसिद्ध गोरुबजारमध्ये एक हो। यहाँ प्रत्येक साता सोमवार र शुक्रवार ठूलो बजार लाग्ने गर्दछ। जहाँ हजारौको सङ्ख्यामा गोरुको खरिद–बिक्री हुन्थ्यो। हाल यो प्राचीन गोरुबजार लोप हुँदैछ। यस गोरुबजारबाट नेपाल–भारतका सयौं कृषक लाभान्वित हुन्थे। खेतीको लागि गोरु खरिद–बिक्री, बिचौलियाहरूको भीड, गोरुको डोरी, घन्टी, बेल्ट, चाबुक, कौडिहार, झुलन, गोरुको नङ काटने र सिङ्ग बनाउने तथा गोरुको गोबर उठाउने, बिक्री भएका गोरुहरूलाई ट्रायल गराउने, हलो, पालो, परिहत बेच्ने र बनाउनेहरू आजभोलि बेरोजगार भएका छन्। गोरु बजार लोप हुनुको मुख्य कारणमध्ये आधुनिक खेती प्रविधिको विकास हुनु नै हो। ट्याक्टर, रोटाभेटर, कम्प्लानबाट खेती गर्दा गोरुहरूको खरिद–बिक्री कम भएको छ। अहिले पनि कतै–कतै साना कृषकहरूले गोरुबाट नै खेती गर्छन्। साथै टायरगाडा, काठेगाडा, ठेला, कोल्हु आदिमा गोरुको प्रयोग भइरहे पनि हाल नेपालका गोरु, गाई, बाच्छा भारत र बङ्गलादेशतिर तस्करी भइरहेका कारण बजारमा गोरुको अभाव भएको छ।
प्रतिकूलतामा अनुकूलता खोज्नु विवेकशील मानिसको धर्म र कर्म हो। प्रतिकूलता जहाँ पनि हुन्छ। प्रतिकूलतालाई जितेर मात्र मानिस मानिस बन्दछ। प्रतिकूलतालाई गाली गरेर बसिराख्यो भने उपलब्धि शून्य मात्र हुन्छ। आज हाम्रो लागि जे प्रतिकूल छ, त्यो अरूको लागि अनुकूल हुन सक्छ । हामीले आप्mनो अनुकूलता खोज्न थाल्यौं भने अरूको लागि त्यो त्यसैगरी प्रतिकूल बन्न जान्छ। तर प्रतिकूलतालाई सहज स्वीकार गरियो भने त्यो मानव धर्मसापेक्ष मानिंदैन। एउटा व्यक्ति लङ्गडो छ भने हिंडन सक्दिनँ भनेर बसिराख्यो भने कुँजिन्छ। अन्धोले आँखा नदेख्दा केही गर्नै नसक्ने होइन । त्यसका लागि प्रयत्न गर्नुपर्छ, वैशाखी बोक्नुपर्छ र अन्तर्चक्ष्Fु उघार्नुपर्छ। प्रगतिशीलता भनेको त्यही हो। प्रगति कसैलाई पनि अनायास प्राप्त हुँदैन। प्रगतिका लागि गरेको प्रयासले त्यही क्ष्Fेत्रमा नभए पनि अर्को क्ष्Fेत्रमा सफलता दिलाउँछ नै। विद्यालयमा सानो विद्यार्थी छँदा सबैले डाक्टर, इन्जिनियर, सिई, सिए, ठूलो व्यापारी, उद्योगपति बन्ने लक्ष्य राखेका हुन्छन्। तर कतिजना सफल हुन्छन् ? जो असफल हुन्छन् के तिनीहरूको जीवन व्यर्थ हुन्छ ? धेरैले त लक्ष्य अनुसार सफलत
सङ्घीय सरकारहरूको अवसर र चुनौती
अधिवक्ता वीरेन्द्रप्रसाद यादव २०७२ असोज ३ मा जारी संविधानले सङ्घीयता र गणतन्त्रको स्थापना गरे पनि तीन तहको चुनाव नहुँदै उक्त उपलब्धि कागजी मात्र थियो। उक्त उपलब्धि संरक्षणको लागि चुनाव अपरिहार्य भएकोले स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभा चुनाव सम्पन्न भएर स्थानीय सरकार त गठन भइसकेका छन् र प्रदेश सरकार गठन प्रक्रियामा छ। प्रदेश सरकार गठन भएपछि वास्तविक रूपमा सङ्घीयता कार्यान्वयन हुनेछ भने प्रदेश सरकारहरूले जनचाहना अनुसार काम गरे भने जनताले दिएको बलिदानको उपलब्धि प्राप्त हुनेछ। गठन भएर प्रदेश सरकारले जनतालाई सेवा दिन थालेपछि मात्र सङ्घीयता कार्यान्वयनको पहिलो चरण पूरा हुनेछ। कुनै पनि संविधानको लोकतान्त्रिक मर्म भनेको समग्र जनताको अपनत्व पाउनु र कार्यान्वयनमा सहज हुनु हो। लगभग अढाई सय वर्षको एकात्मक राजतन्त्रात्मक व्यवस्था अन्त्य गरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान पाउनु आमजनताको लागि ठूलो उपलब्धि हो भने नेपाली संविधानसभाको विशव सामु सफलताको सन्देश हो। जनप्रतिनिधिहरूले प्रथमपटक आप्mनो उद्देश्य पूरा गर्न सफल भएको दृष्टान्त पनि हो। संविधान निर्माण भयो तर संविधान निर्माताहरूको
ठोरीमा गुम्बाको शिलान्यास
प्रस, ठोरी, १५ माघ/ ठोरी–१ को ऐतिहासिक पूmटबल मैदान नजिकै तामाङ समुदायले निर्माण गर्न लागेको गुम्बाको सोमवार एक कार्यक्रमबीच शिलान्यास भएको छ। लामा गुरुहरूले धार्मिक परम्परा अनुसार पूजापाठ गर्दै गुम्बाको शिलान्यास गरेको गुम्बा निर्माण समितिका अध्यक्ष दुर्गाबहादुर मोक्तानले जानकारी दिए। झन्डै आधा दर्जन लामा गुरुले पूजापाठ गरेपछि गुम्बा निर्माणका लागि जमिन उपलब्ध गराएका अजय लामाले गुम्बाको शिलान्यास गरे। शिलान्यास कार्यक्रममा स्थानीय अगुवा, तामाङ बुद्धिजीवी, युवा तथा महिलाहरूको सहभागिता रहेको उनले बताए। चन्दा सङ्कलन गरेर तामाङ समुदायले गुम्बा निर्माण गर्न लागेको गुम्बा निर्माण समितिका अध्यक्ष मोक्तानले जानकारी दिए।
पर्सा स्कूल्स ग्रुप २०७४ क्रिकेट टुर्नामेन्ट
प्रस, वीरगंज, १५ माघ/ आज प्रथम चरणको क्याम्ब्रिज एजुकेशनल र युनाइटेड सेकेन्डरी स्कूल बीच भएको क्रिकेट खेलमा युनाइटेड सेकेन्डरी स्कूल १९ रनले विजयी भएको छ। म्यान अफ द म्याच युनाइटेड स्कूलका इमरान हुसेन घोषित भए। दोस्रो चरणमा ज्ञानोदय बाल सेकेन्डरी स्कूल र लर्डबुद्ध मेमोरियल एकेडेमीबीच खेल भएको थियो, जसमा ज्ञानोदय बाल सेकेन्डरी स्कूल ७ विकेटले विजयी भयो। यस खेलका म्यान अफ द म्याच ज्ञानोदय बाल सेकेन्डरीका सरफराज मंसुरी घोषित भए। तेस्रो चरणको खेल मदरल्यान्ड सेकेन्डरी स्कूल र युनाइटेड सेकेन्डरी स्कूलबीच भएको थियो जसमा युनाइटेड सेकेन्डरी ३७ रनले विजयी भयो। युनाइटेड सेकेन्डरी स्कूलका इमरान हुसेन ५१ रनसहित म्यान अफ द म्याच घोषित भए । प्रथम पर्सागढी गोल्डकप ः नव जनजागृति सामु आयोजक स्तब्ध प्रस, सिमरा, १५ माघ/ आयोजक आमोदेवी युथ स्पोटर््सलाई सडन डेथमा हराउँदै नव जनजागृति युवा क्लब सिमरा प्रथम पर्सागढी गोल्डकप पूmटबलको क्वाटरफाईनलमा प्रवेश गरेको छ। पर्सा, बढनियारमा जारी गोल्डकपको आजको खेलमा आयोजकलाई सडन डेथमा हराउँदै नव जनजागृति सिमरा अन्तिम आठमा पुगेको हो। नव जनजागृ
२०७४ माघ १५ गते सोमवारको प्रतीक दैनिक पढ्नुहोस् ।
प्रस, परवानीपुर, १४ माघ/ बारा–पर्सा औद्योगिक करिडोरका सिमेन्ट उद्योगका लागि क्लिंकर आयातमा रक्सौलबाट रोक लागेपछि यहाँका व्यापारीहरूले मुज्जफरपुरलाई डेस्टिनेशन बनाएका छन् । करिब १० दिनदेखि मुज्जफरपुर नारायणपुर रेल्वे स्टेशनबाट व्यापारीहरूले क्लिकंर ल्याउन थालेका हुन् । वीरगंज उद्योग वाणिज्य सङ्घ वीरगंजका सचिव माधव राजपालका अनुसार नेपाली सिमेन्ट उद्योगले विकल्पको रूपमा सडकमार्ग रोज्दै विहारको मुज्जफरपुरबाट हाल क्लिकंर आयात गरिरहेका छन् । यस करिडोरको विश्वकर्मा, नारायणी, अम्बे, शालिमारलगायत ठूला सिमेन्ट उद्योगले सोही स्थलबाट क्लिंकर ल्याइरहेको उनले बताए । गत डिसेम्बर २० देखि रक्सौल रेल्वे साइडिङबाट क्लिकंर लोड–अनलोडमा रोक लागेको थियो । केही महँगो परे पनि उद्योग धान्न नारायणपुर रेल्वे साइडिङबाट ट्रकमा क्लिकंर ल्याइरहेको उनले बताए । त्यहाँबाट क्लिकंर मगाउँदा प्रतिटन २ हजार देखि २५ सय रुपियाँँ महँगो परेको उनको भनाइ छ । एक ¥याक माल पाँच दिनभित्रै नेपाल आउने जानकारीसमेत उनले दिए । हालै भारतको विभिन्न राज्यबाट प्रतिदिन ३ वटासम्म क्लिकंर बोकेको रेल्वे ¥याक मुज्जफरपुर आउन लागेको
आफताब मेडिकलको हकमा अन्तरिम आदेश जारी भएन
प्रस, वीरगंज, १४ माघ/ नाउक्ष्Fे अस्पतालको हाताभित्र रहेको आफताब मेडिकल हलको हकमा पनि पर्सा जिल्ला अदालतले अन्तरिम आदेश बदर गरेको छ । यस अघि सो मेडिकलले दिएको रिट निवेदनमा अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । तर अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने विषयमा शुक्रवार र आज भएको बहसपछि अदालतले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिएको बताइएको छ । अन्तरिम आदेश जारी नभएपछि सो मेडिकल हल पनि बन्द हुने भएको छ । अस्पताल प्रशासनले पुस २८ गते तालाबन्दी गरेपछि सो पसलले पुस ३० गते पसल सञ्चालन गर्न दिएको निवेदनको आधारमा पर्सा जिल्ला अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । सोही आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय र अस्पताल प्रशासनले ताला खोलेको थियो । आज न्यायाधीश बद्रीप्रसाद ओलीले नै आदेश खारेज गरेका हुन् । आफताबको अन्तरिम आदेश जारी भएपछि अन्य पसलले पनि अदालतमा अन्तरिम आदेशको लागि रिट दिएका थियो तर अदालतले उनीहरूको हकमा रिट निवेदन दर्ता गर्ने मात्र काम गरेको छ । नाउक्षे अस्पतालमा १४ वटा सटर भाडामा थियो । सर्वोच्चको आदेश र अख्तियारको आदेशपछि अस्पतालमा निजी सङ्घसंस्था, सहकारीलगायत सबै पसलहरू बन
प्रेमनाथ शर्मा रहेनन्
प्रस, वीरगंज, १४ पुस/ नागरिक समाजका अगुवा एवं कानून व्यवसायी प्रेमनाथ शर्माको आज निधन भएको छ । शर्मा नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्व जिल्ला अध्यक्ष्F श्याम प्याकुरेल पिता हुन् । केही समयदेखि शर्मा बिरामी रहेका शर्मालाई उपचारको लागि राति अस्पताल पु¥याइएको थियो र उपचारको क्रममा आज साँझ ५ बजे निधन भएको पारिवारिक स्रोतले जनाएको छ । धार्मिक परम्परा अनुसार भोलि अन्त्येष्टि गर्ने परिवारले जनाएको छ । उनकी पत्नीको एक वर्ष पहिले नै मृत्यु भएको थियो । उनका दीनानाथ शर्मा र श्याम पोखरेल दुई छोरा छन्।
६–लेन वीरगंज–परवानीपुर सडकखण्डको काम रोका
प्रस, वीरगंज, १४ माघ/ वीरगंज–पथलैया सडकखण्ड अन्तर्गत गण्डकदेखि परवानीपुरसम्म निर्माण भइरहेको ६ लेन सडक विस्तारको काम रोकी नम्बरी जग्गाको मुआबजाको माग गर्दै परवानीपुरवासीले ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । परवानीपुरका बासिन्दाले आज जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्सा र सडक विभाग, आयोजना निर्देशनालय, एडिबी सबरिजनल कार्यालय, पथलैयामार्पmत् भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । हाल निर्माणधीन वीरगंज–पथलैया सडक ६ लेन सडक विस्तार कार्य अन्तर्गत सडक विभागले उचित मुआबजा नदिई काम गरिरहेको भन्दै गत बिहीवारदेखि काम रोका गरिएको थियो । परवानीपुरमा जबरजस्ती घर–टहरा हटाएर सडक विस्तार गरिएकोले काम रोकिएको परवानीपुरका स्थानीय बासिन्दा रविकुमारले बताए । नागमणि उपाध्यायले नम्बरी जग्गाको मूल्याङ्कन गरी उचित मुआब्जा सहित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न माग गरेसाथै मागको बेवास्ता गरी सडक निर्माण कार्य जारी राखे आन्दोलन गर्न बाध्य हुने ज्ञापनमा उल्लेख छ । यस अघि व्यापारिक राजमार्ग सडक विस्तार योजना कार्यालय पथलैयाले पथलैयादेखि वीरगंजसम्म सडक विस्तार कार्य अघि बढाउँदा जीतपुरवासीले
क्रिकेट टुर्नामेन्टमा लर्डबुद्ध र ज्ञानोदय विजयी
प्रस, वीरगंज, १४ माघ/ पर्सा स्कूल्स ग्रुप २०७४ क्रिकेट टुर्नामेन्ट आदर्शनगर रङ्गशाला मैदानमा आजदेखि शुरु भएको छ । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि रिलिफ सोसाइटी अफ कमर्स वीरगंजका सदस्य गणेश लाठले ब्याटिङ र रिपोटर््स क्लब नेपाल, पर्साका कन्हैया गुप्ताले बलिङ गरेर टुर्नामेन्टको उद्घाटन गरेका थिए । पहिलो चरणको खेल लर्डबुद्ध मेमोरियल र युनाइटेड सेकेन्ड्री स्कूलबीच भएकोमा लर्डबुद्ध विजयी भएको थियो । दोस्रो चरणको खेल ज्ञानोदय बाल सेकेन्ड्री स्कूल र मदरल्यान्ड माविबीच भएको थियो । एन–प्याव्सनका केन्द्रीय सदस्य नन्दन यादवको सभापतित्वमा सम्पन्न कार्यक्रममा स्वागत भाषण नवीन श्रेष्ठ र सञ्चालन राजेश लिम्बूले गरेका थिए ।
तेक्वान्दो सङ्घको प्रादेशिक भेला
प्रस, वीरगंज, १४ माघ/ प्रदेश नं. २ स्तरीय नेपाल तेक्वान्दो सङ्घको प्रादेशिक भेला आज वीरगंजमा सम्पन्न भएको छ । भेलाको उद्घाटन गर्दै प्रदेश सभासद् ओमप्रकाश शर्माले तेक्वान्दो खेलले मानिसलाई आत्मरक्ष्Fा, व्यक्तिगत सुरक्ष्Fा तथा शरीर चुस्तदुरुस्त राख्न ठूलो सहयोग पु¥याउने बताए । उनले हिजोको तुलनामा आजका बालबालिकाहरूको शारीरिक खेलभन्दा इलेक्ट्रोनिक खेलतर्पm आकर्षण बढेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे । तर आजको भेलाले तेक्वान्दो खेलको विकास गर्न उत्साहित रहेको महसुस गराएको बताए । भेलाले राजेशमान सिंहको अध्यक्ष्Fतामा २३ सदस्यीय प्रदेशस्तरीय समिति गठन गरेको छ । समितिको उपाध्यक्ष प्रहरी नायब महानिरीक्ष्Fक गणेश केसी, विनोद मानन्धर, राजनीतिकर्मी शिव पटेल, उद्योगपति गोपाल केडिया रहेका छन् । त्यसैगरी महासचिव ज्ञानेन्द्र झा, सचिव विजय साह, कोषाध्यक्ष्F अजितपाल सिंह रहेका छन् । सदस्यहरूमा भूषण यादव, रम्भा मिश्रा, मुनी श्रीवास्तव, प्रेमबाबू पटेल, बालकृष्ण पोखरेल, मीना लामा, शङ्कर लामा, जीतसिंह लामा, हेमलाल श्रेष्ठ चयन भएका छन् ।
पर्सागढी गोल्डकपः वीरगंज युथ विजयी
प्रस, वीरगंज, १४ माघ/ पर्सा, बढनियारमा जारी प्रथम पर्सागढी गोल्डकपको आजको खेलमा वीरगंज युथ एकेडेमी विजयी भएको छ । हाम्रो पूmटबल क्लब वीरगंजलाई ४–० गोल अन्तरले पराजित गर्दै वीरगंज युथ क्वाटरफाइनलमा प्रवेश गरेको छ । आठौंं र २७ औं मिनेटमा वीरगंज युथका कृष्ण शाक्यले दुई गोल गरे । खेलको २४ औं र ५४ औं मिनेटमा कृष्ण कार्कीले दुई गोल गरेका थिए । भोलिको खेलमा आयोजक आमोदेवी युथ स्पोटर््स र नव जनजागृति युवा क्लब सिमराबीच हुने बताइएको छ ।
बजार, विज्ञापन र शिक्षा–१
अनन्तकुमार लाल दास हुनत विद्यालयको प्रचार–प्रसार वर्षभरि टेलिभिजन, एफएम र समाचारपत्रहरूमा भइरहन्छ, तर खासगरी नयाँ सत्र प्रारम्भ हुनुपूर्व चैत र वैशाख महिनामा यस्ता प्रचारको बाढी नै आउँछ । प्रत्येक विद्यालय, खासगरी संस्थागत आकर्षक टैग लाइनसहित आआप्mनो विद्यालयको विशेषता प्रचारित–प्रसारित गर्ने कोशिशमा कुनै कमी गर्दैनन् । यस प्रकारको विज्ञापनको एक मात्र लक्ष्य बढीभन्दा बढी अभिभावकहरूलाई आपूmतर्पm आकर्षित गर्नु हो । केटाकेटीहरूको लागि राम्रो शिक्षा दिलाउने जिम्मेवारी अभिभावकहरूको हुन्छ भन्ने कुरामा विद्यालय सञ्चालक पूर्णरूपले विश्वस्त हुन्छन् । यस कारण विद्यालयको विशेषता अभिभावक समक्ष पु¥याउनु विद्यालय सञ्चालकहरूका लागि आवश्यक हुन्छ । अर्कोतर्पm सामुदायिक अर्थात् सरकारी विद्यालयहरूमा खस्दो नामाङ्कन र कम नामाङ्कनले गर्दा विद्यालयहरू गाभिने कार्य भइरहेको हुँदा सरकारी विद्यालयहरूले पनि प्राइभेट विद्यालयझैं प्रचार–प्रसार गर्न आवश्यक ठान्छन् । उसो त सरकारले पनि सरकारी विद्यालयहरूमा नामाङ्कन वृद्धिका लागि भर्ना अभियानको थालनी गरेको छ तर यो मात्र एक दिने ¥यालीमा सीमित हुन्छ । यस कारण आ
अप्ठ्यारो कसलाई ?
यद्यपि सरकारले अहिले गरेका र गर्ने निर्णयहरूलाई नराम्रो मान्न सकिंदैन, तर आफैंले कार्यान्वयन गर्नु नपर्ने र अरूलाई बोझ हुने किसिमको निर्णय गरेर व्यक्तिको रूपमा कोही सन्तुष्ट हुन सक्ला, समग्र देश र आउने सरकारहरूको लागि यी निर्णयहरूले विपत्ति ल्याउने स्पष्ट देखिन्छ । ज्येष्ठ नागरिकको सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने उमेर ५ वर्ष घटाएर ६५ वर्ष गर्नु र एकल, अपाङ्ग महिलाको उमेर ५५ वर्ष पु¥याउनुमा सरकारको लक्ष्Fित समूहलाई लाभ पु¥याउनुभन्दा आउने सरकारलाई अप्ठ्यारो हुने किसिमको हुनु आपत्तिजनक देखिएको छ । दिनु राम्रो कुरा हो, किनकि पाउने बाहिरकोले होइन, आप्mनै देशवासीले हो । सरकारले बेरोजगार भत्ता पनि दिने निर्णय गर्न थालेको छ, यो पनि झन् राम्रो कुरा हो, तर के यी यावत् खर्चको भार राज्यकोषले वहन गर्न सक्छ ? मुलुक सङ्घीय संरचनामा गएपछि यसै पनि केही वर्ष विभिन्न निर्माण र व्यवस्थापनमा राज्यको ठूलो कोष खर्च हुने देखिएको छ । सातवटा प्रदेशका लागि पुरानै भवन र यताको उता–उताको यता गरेर काम चलाउन सकिएला, तर स्थायित्वका लागि नयाँ भवनहरू बनाउनैपर्छ । ५५० जना प्रदेशसभा सदस्यहरूको खर्च पनि यसै बेला बढेको छ ।
२०७४ माघ १४ गते आइतवारको प्रतीक दैनिक पढ्नुहोस् ।
प्रदेशसभा सदस्यलाई वीरगंज प्रवेशमा निषेध गरिने
प्रस, वीरगंज, १३ माघ/ माघ २१ गते बस्ने प्रदेश नम्बर २ को प्रदेशसभाको पहिलो बैठकले वीरगंजलाई स्थायी राजधानी तोक्ने निर्णय नगरे पर्सा/बाराबाट निर्वाचित प्रदेश सदस्यहरूलाई वीरगंज प्रवेशमा निषेध गर्ने वीरगंज राजधानी सङ्घर्ष समितिका अगुवाहरूले बताएका छन् । वीरगंजलाई प्रादेशिक राजधानी बनाउन माग गर्दै शनिवार २४औं दिनसम्म पनि रिले अनसन जारी छ । प्रदेशसभाको पहिलो बैठक नजिकिंदै जाँदा सङ्घर्ष समितिले पनि आन्दोलनका रणनीतिहरू फेर्दैछ । सोही क्रममा आज उनीहरूले कालोझन्डा बोकी बिरोध ¥यालीसमेत प्रदर्शन गरेका छन् । आज वीरगंजमा भएको विरोध जुलुसपछि घण्टाघर चोकमा आयोजित विरोधसभामा एमालेका नेता मनोज चौधरीले सरकारले अस्थायी राजधानी जनकपुरलाई तोकेर वीरगंजसँग कुठाराघात गरिसकेको भन्दै अब स्थायी राजधानी तोक्ने जिम्मेवारी प्रदेश सदस्यहरूको हातमा आएकाले प्रदेशसभाको पहिलो बैठकले स्थायी राजधानी वीरगंजलाई बनाउने निर्णय नगरे सबै दलका सदस्यहरूलाई वीरगंज प्रवेशमा निधेष गर्ने चेतावनी दिए अहिले वीरगंजमा भइरहेको आन्दोलनमा केही दलका नेता र निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले असहयोग गरेको भन्दै उनले यदि वीरगंज
छावा जन्मेपछि निकुञ्जमा खुशी
प्रस, पथलैया, १३ माघ/ चित्रसेनकली नामको हात्तीले पोथी छावालाई जन्म दिएपछि पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जस्थित हात्तीसारका कर्मचारी शनिवार खुशी हुँदै स्याहारमा व्यस्त भएका छन् । करिब २२ महिनाको लामो प्रतीक्षापछि गर्भवती चित्रसेनकलीले अमलेखगंजस्थित हात्तीसारमा बिहान ३ बजे पोथी छावालाई जन्म दिएकी हुन् । करिब १२ वर्षपछि हात्तीसारमा स्वस्थ छावाको जन्म भएपछि पछुवा, माउतेलगायत अन्य कर्मचारी खुशी साटासाट गर्दै स्याहारसुसारमा जुटेका हुन् । यसअघि २०५६ सालमा भवानीकली नाम गरेको हात्तीले मृत भाले छावा जन्माएको थियो । त्यसयता हात्तीसारमा कुनै छावाको जन्म भएको छैन । १२ वर्षको उमेरमैं चित्रसेनकलीले स्वस्थ पोथी छावालाई जन्म दिएपछि निकुञ्जमा खुशी थपिएको प्रमुख संरक्षण अधिकृत हरिभद्र आचार्यले बताए । चित्रसेनकली गर्भवती भएको २२ महिना पूरा भई २३ महिना लागेपछि छावाको जन्म भएको आचार्यले जानकारी दिए । २४ महिना वा पछि जन्मिने छावालाई खतरा पनि हुन सक्ने चिकित्सकको भनाइ छ । बच्चा जन्माउने क्रममा माउ हात्तीले खुट्टाले थिचेर मार्न सक्ने खतरा हुँदा आरक्षका पछुवा र माउते लामो समयदेखि टेन्ट गाँडेर राति
सङ्घीयता ः सुशासन र अन्तर्य
ओमप्रकाश खनाल भ्रष्टाचार सुशासनको अवरोध मात्र होइन, समकालीन द्वन्द्व र अस्थिरताको मुख्य कारण पनि हो । सुशासनको अभाव र अवसरहरूको असमान वितरणकै कारण राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक अन्तर्विरोधहरूले बढावा पाइराखेको तथ्य अघिल्तिरै छ । यो परिदृश्यमा हामी राजनीतिक र आर्थिक अधिकारहरूको विकेन्द्रित अभ्यासको प्रारम्भिक चरणमा प्रवेश गरिराखेका छौं । भ्रष्टाचार आज विश्वव्यापी समस्या बनेको छ । अतिविकसित भनिएका देशमा भ्रष्टाचारका अनेक आयामहरू उद्घाटित भइराखेका छन् । तर हामीजस्तो अल्पविकसित देशका बासिन्दाका निम्ति यसको सकस तुलनात्मक अधिक हुनु सामान्यजस्तै भइसकेको छ । भ्रष्टाचारविरोधी अभियानमा लागिपरेको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले विश्वका १७६ देशलाई समेटेर तयार पारेको भ्रष्टाचार सूचकमा नेपाल १३१औं स्थानमा छ । यो बढी भ्रष्टाचारमा ४५औं नम्बरमा हो । यो तथ्य मात्र पनि वैयक्तिक स्वार्थका लागि अधिकारको दुरुपयोगको सघनता भेउ पाउन पर्याप्त हुन सक्छ । अध्ययनहरूले भ्रष्टाचारको आयतन विस्तार भइराखेको देखाइरहेका छन् । भ्रष्टाचारजन्य सञ्जाल यति विकृत स्वरूपमा देखा परिराखेको छ कि यसलाई सामान्यीकरण गरिंदैछ
मानवीय मूल्यको शिक्षा
मानवीय मूल्य त्यो हो, जसले सम्पूर्ण मानवजातिको मात्र होइन, बरु समस्त प्राणी समुदायको आवश्यकता र आकाङ्क्षाको सन्तुष्टि गर्छ । मूल्यले मानव–जीवनलाई आदर्श बनाउने प्रयासको लागि दीपस्तम्भको कार्य गर्छ । सभ्यता र संस्कृतिको जीवन–मूल्यसँग सम्बन्ध अनुलोम छ, जीवन–मूल्य जति उच्च हुन्छ, सभ्यता र संस्कृति पनि उत्तिकै महान् हुनेछ । आज हामी आप्mनो सभ्यता तथा संस्कृतिदेखि टाढा भएका छौं, कारण हाम्रो जीवन–मूल्यको पतन हुँदै गइरहेको छ । भारतका पूर्व राष्ट्रपति डा. अब्दुल कलाम आजादले आप्mनो देशका व्यक्तिको स्वच्छन्द वृत्तिमाथि टिप्पणी गर्दै भनेका थिए– “सिङ्गापुरमा तपाईं आप्mनो चुरोटको ठूटो सडकमा फाल्नुहुँदैन । तपाईं साँझ ५ देखि ८ बजेको बीच आर्थड रोडमा कार चलाउँदा करिब साठी रुपैयाँ भुक्तान गर्नुहुन्छ । तपाईं सिङ्गापुरमा यदि पार्किङमा निर्धारित समयभन्दा बढी गाडी खडा छ भने टिकट पन्च गराउनुहुन्छ, तर तपाईं केही भन्नुहुँदैन, किन ?” “दुबईमा तपाईं रमजानको दिन सार्वजनिकरूपमा केही पनि खाने साहस गर्नुहुँदैन । जेद्दामा टाउको नढाकीकन बाहिर निस्किनुहुन्न । वाशिङ्टनमा तपाईं पचपन्न मिल प्रतिघण्टाभन्दा माथि गा